health teps Archives – Samacharpati
काठमान्डाैँ, २८ माघ । पेटको अल्सर भएमा पेटमा प्वाल पर्ने वा घाउ हुने गर्छ । यस्तो अल्सर विशेषगरी गलत खानपानका कारण हुने हो । सामान्यतया, खाना पचाउने एसिडले आमाशयको पर्खाललाई असर गरेमा अल्सर हुने गर्छ । यस्तो अल्सर पेटको भित्री भागमा, भोजन नली तथा सानो आन्द्रामा विकास हुन्छ । पेटमा अल्सर भएमा पिडा नाइटोबाट सुरु भई […]
जान्नुहाेस ! कोलोस्टोरको जोखिम,कारण, लक्षण र नियन्त्रण काे उपाय
२१ माघ । कोलोस्टोर रगतमा पाइने बोसो (फ्याट) हो । स्वास्थ्य जीवनका लागि यो नितान्त आवश्यक हुन्छ । यद्यपी यसको रगतमा यसको मात्रा सामन्यभन्दा बढी भयो भने रगत जम्छ । यसले मुटुमा समस्या ल्याउँछ । चिकित्सकको अनुसार कुनैपनि उमेरको पुरुष महिलामा कोलोस्टोरको मात्रा २ सय एमजी/डिएल भन्दा कम हुनुपर्छ । कोलोस्टोर किन आवश्यक छ ? कोलोस्टोरले […]
१९ माघ । पेट त भरिएको छ । केही समयअघि पेट चर्किनेगरी खाना खानुभएको थियो । यस्तो अवस्थामा भोक लागेको महसुष हुन्छ भने त्यसले शरीरमा केही गडबडी छ भन्ने संकेत गर्छ । भरपेट खाना खानुभयो । तर, केही क्षणमै भोक लागेको महसुष भयो । किन यस्तो हुन्छ ? १. न्यून रक्तचाप बारम्बार भोक लाग्नुको एउटा ठूलो […]
काठमान्डाैँ, १० पुस । कफी पिउनाले स्वास्थ्यमा सकारात्मकका साथसाथै नकारात्मक प्रभाव पार्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। २० हजार जनामा गरिएको उक्त अध्ययनले सही तरिकाबाट कफी पिउने मानिसहरू धेरै बाँच्छन् भनी उल्लेख गरेको छ। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा कफीले टाइप टु डायबिटिज, कलेजोसम्बधी रोग‚ कोलोरेक्टर क्यान्सर‚ अल्जाइमर र छालाको क्यान्सरको रोकथाममा पनि सहयोग गर्ने उल्लेख छ। तर, कफी कस्तो […]
काठमान्डाैँ, २९ मङ्सिर । नवजात शिशु तथा स-साना बच्चाहरुलाई आफुसंग सुताउने कि आफुभन्दा अलग ? आमा र बच्चाको लागि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले बच्चाहरुलाई प्रारम्भदेखि नै अलग्ग सुत्ने बानी बसाल्नु पर्छ । त्यसो गर्दा विभिन्न किसिमको फाइदा हुन्छन् । बच्चा अलग सुत्नाले आमाको स्वास्थलाई फाइदा पुग्छ । बच्चा पनि फराकिलो ओछ्यानमा आनन्दसंग सुत्न सक्छ । त्यसैले आमा बच्चा […]